Manao antso ny fikambanan'ny Dokotera, ny Farmasiana, ny Dentistes, ny Vétérinaires, ny Sages-femmes, ny Infirmiers ary ny Psychologues, mba samy hanamarina ny vaovao ahely ny rehetra mba tsy hitarika savorovoro sy ahiahy na fiantsoana fitsaram-bahoaka. Mitovy daholo ny rehetra hoy ireto mpisehahatra amin'ny fahasalamana, ary tsy maintsy tsaboina arak'izay fitaovana ananana ny rehetra. Miantso fitoniana sy filaminana ho an'ny rehetra ary hanaja ireo tobim-pahasalamana sy hopitalim-bahoaka hanatanterahana ny asam-pitsaboana.
lundi, 24 février 2020 20:11
Grand sud: L'Etat met en place des solutions à long terme
La délégation menée par le Président de la République Andry Rajoelina a poursuivi sa descente dans les districts de Beloha, Bekily, et Ampanihy ce 23 février 2020. Le Chef de l'Etat a lancé une opération de distribution de produits de première nécessité, des repas chauds, et des compléments alimentaires pour les enfants. Des aides d'urgence ont été aussi distribuées dans plusieurs communes fortement touchées par la sécheresse. Une grande majorité de la population du Sud est touchée par la malnutrition due à la sécheresse. Une dizaine de camions citernes, en plus de ceux qui sont déjà sur les lieux, se chargeront de distribuer de l'eau gratuitement dans les communes concernées.
Tafiditra amin’ny famahana ny olana mianjady amin’ny lafiny mahaolona ho an’ireo mpiasan’ny KRAOMA (Kraomita Malagasy) ny fahatongavan’ny haraton’aina ho an’ireo mpiasa tany an-toerana ny Zoma 21 febroary 2020. Vary 25 taonina, menaka 500 litatra, labozia 1000 isa sy savony 1500 isa, tolo-tanana avy amin'ny tsara sitrapo ho an’ireo mpiasan’ny KRAOMA no tonga tao Brieville Distrikan’i Tsaratanana, ka mpiasa 500 mahery sy ny ankohonan’izy ireo avy no hisitraka an’izany. Nanambara ny Minisitry ny Harena an-kibon’ny tany sy ny loharanon-karena stratejika, Ravokatra Fidiniavo fa tsy maintsy hirosoana ny fepetra fanarenana ny orinasa Kraomita Malagasy na dia eo aza ny fahasahiranana atrehina amin’ny fiaraha-miombon’antoka. Mila ny mpiasa hitondra ny traikefany sy ny fangaharaharan’ny fitantanana anefa izany. (Jereo Sary Tohiny)
Notoloran’ny Sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimariam-pirenena Jeneraly Richard Ravalomanana mivady mari-pakasitrahana ireo zanaka zandary mendrika tamin’ireo fanadinana ara-panjakàna nandritra ny taom-pianarana 2018-2019. « Mila olona mahay any amin’ny sehatra misy azy avy ny firenena mba hampandroso azy, fa tsy olona ahazo asa araky ny kolikoly », hoy ny Jeneraly Richard Ravalomanana. Nampirisika ny ankizy hianatra, hiezaka, hahay tsara ny tenany satria reharehan’ny ray aman-dreny ny manana zanaka mahay. Notanterahina tao amin'ny Akany FIVAZA Betongolo ny lanonana mikasika izany ny sabotsy 22 febroary 2020. (Jereo Sary Tohiny)
samedi, 22 février 2020 22:52
Faritra Androy: Manomboka ny tetikasa vonjy aina iatrehan’ny mponina ny haintany
Kaominina miisa 58 ao amin’ny Faritra Androy no isany ianjadian’ny haintany tato anatin’ny efa-bolana teo, izay nampihantona ny orana. Tonga tany Androy ny delegasiona tarihin’ny filoham-pirenena Andry Rajoelina, androany sabotsy 22 febroary 2020, nanomboka ny tetikasa vonjy aina hamonjena ny mponina. Hozaraina rano maimaimpona ny mponina, ary dia hisy kamiao vaovao mpitaona rano hitety ireo Kaominina hizara izany maimaimpona amin’ny mponina mandritra ny efa-bolana ho avy.
samedi, 22 février 2020 21:00
Sary: CUA Serasera
Toeram-pisakafoanana « Zaimaika »: Nirodana tampoka ny tafo noho ny orana be omaly alina
Tao anaty ora-nikija alina no nirodana tampoka ny tafon'ny « Zaimaika », izay misy toeram-pisakafoanana maromaro. Efa antitra, ary efa fotoana elaela no tsapan’ny mpivarotra ao ny fahasimbana tamin’ity foto-drafitra fihinanan’ny olona vary mitsangana sy kafe sy mofo ity. Andro alina no nirodanany. Tsy nisy aina nafoy. Olona aman’arivony isan’andro no manao tohan’aina ao amin’ity toerana ity. Efa nodiovina moa ny toerana, ary nisy lamina napetraka vonjimaika ho an'ireo mpivarotra. (Jereo Sary Tohiny)
Tonga teny Antsahasoa Iavoloha, Antananarivo Atsimondrano, toerana misy ny Akany fitaizana zaza kamboty, zanaky ny miaramila lavo teo am-panatanterahana iraka, androany alakamisy 20 febroary, ny Minisitry ny Fiarovam-pirenena, ny Jeneraly Rakotonirina Richard. Nankahery ny ankizy ary nitondra fitaovam-pianarana, sy ireo kojakoja mety ilain'izy ireo, ankoatran'ny kilalao ny minisitra. Nampirisika azy ireo hilofo hatrany amin'ny fianarana ihany koa izy, ary nisaotra ihany koa an'ireo mpanabe eo anivon'io toerana io ny tenany, ary nanolotra fitaovana hoentina manampy azy ireo amin'ny andavanandron'ny Akany. (Jereo Sary Tohiny)
jeudi, 20 février 2020 10:43
Famatsian-drano any Atsimo: Tsy nahavaha olana ny AES ?
Maina ny tany any atsimo, saro-tadiavina ny rano. Distrika enina no ahiana ho voakasiky ny haintany, tsy fahampian-drano sy tsy fahampian-tsakafo any atsimon’ny Nosy : Amboasary Atsimo, Ambovombe, Bekily, Betioky, Ampanihy ary Tsihombe araka ny tatitry ny Filankevitry ny minisitra omaly. Mipetraka ny fanontaniana manoloana ny olana amin’ny tsy famatsiana rano any atsimo hoe : tsy nahavaha olana ve ny fisian’ny AES (Alimentation en Eau dans le Sud), izay manana ny foibeny ao Ambovombe Androy. Manana fiara be « citerne » fitaomana rano tokony hamatsiana ireo toerana fitsinjarana rano ho an’ny mponina.
mercredi, 19 février 2020 15:41
IST Manakara: Hifanome tanana ho fanatsarana ity sekoly ambony ity ny ministera
Nihaona tamin’ny Minisitry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa, Assoumacou Elia Béatrice tao amin’ny biraony eo Fiadanana, omaly 18 febroary, ireo Raiamandreny avy ao amin’ny Faritra Vatovavy Fitovinany. Niaraha-nidinika ny fomba hanatsarana ny kalitaon’ny fampianarana sy hanomezana sehatra mampiroborobo ny kalitao, sy mitsinjo ireo mpianatra. Anisan’izany ny fanatsarana ny sampana fampianarana izay sahanin’izy ireo ao amin’ny IST Manakara, miompana indrindra amin’ny fambolena sy fiompiana. Vonono ny hifanome tanana amin’ny fanatanterahana ireo dingana rehetra ho fanatsarana ity sekoly ambony ity ny ministera. (Jereo Sary Tohiny)